Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee ka baxa Daljir oo xalay galay habeenkii lixaad – Radio Daljir
Luulyo 29, 2012 4:18 g 0
Bosaso, July 29 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee radio Daljir oo ay bisha Ramadaanka ay ku tartamaan dugsiyad sare ee Puntland ayaa xalay galay habeenkii lixaad.
Tartanka oo ka koobnaa laba qaybood ayaa waxaa qaybtiisii hore ku tartamay dugsiyada sare Al-waaxa Garoowe iyo dugsiga Manaara Baydaa Boosaso.
Labada dugsi ee Al-waaxa iyo Manaara Baydaa? ayaa midkiiba la waydiiyay lix su’aalood sida uu qabo sharciga u yaala barnaamijka.
Dugsiga Manaaratu Baydaa ayaa la waydiiyay lix su’aal oo uu xaqa u lahaa, waxaa uu ka jawaabay afar su’aal, mana helin ka faa’iidaysi, waxaa uu helay sideed dhibcood.
Dugsiga Al-waaxa ayaa la waydiiyay lix su’aalood, waxaa uu ka jawaabay shan ka mid ah su’aalihii la waydiiyay,kafaa’iidaysi waxaa uu u helay hal su’aal, sidaasi ayuu ku qaatay kow iyo toban dhibcood guushana ay ku raacday.
Qaybtii labaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliim ayaa waxaa ku tartamay dugsiga C/laahi Ibraahim oo Ufeyn ah iyo Imaamu nawaawi Boosaaso.
Dugsiga C/laahi Ibraahim Ufeyn ayaa la waydiiyay lix su’aal oo uu xaq u lahaa, waxaa uu ka jawaabay laba su’aal iyo hal ka faa’iidaysi ah, waxaa sidaasi uu ku helay shan dhibcood.
Dugsiga Nawaawi Bosaso ayaa isaguna la waydiiyay lixdii su’aalood ee uu xaqa u lahaa, waxaa uu ka jawaabay laba su’aal oo kaliya, afar su’aal oo ka faa’iidaysi ah, sidaasi ayaa waxaa uu ku helay 8-dhibcood guushana ay ku raacday.
Caawa oo tartanka gelli doono habeenkii todobaad ayaa waxaa tartami doona dugsiyada kal ah:
Nugaal Secondry Vs Bosaso Secondry
Omar Samatar Galkacyo Vs Imaamu Nawawi Garowe.